အိုးအို့အိုး !!!!! ဂျစ်အဆင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပေါ်လွင် နေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် – Shwe Yoe
အိုးအို့အိုး !!!!! ဂျစ်အဆင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပေါ်လွင် နေတဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ကို သိကြမယ်ထ င်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ်ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့အတူ လှပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူမ ရဲ့ အမိုက်စားပုံတွေ နဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးလ ည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်နဲ့ အင်တာဗျူးများစွာကိုလည်း လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလော မှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှတရားတွေနဲ့ ညို့ယူဖမ်းစားထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေး ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုံလေးဟာ ကြည့်ရှုသူတွေများပြား ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခု အခါမှာဗတာ့ သူမက ပုံလေးထဲမှာ ဆွဲဆောင်မှုမှုရှိရှိနဲ့ လှရက် လွန်းနေပြီး ပုံတွေကို ပရိသတ်ကြီး ကို အတွက် တင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင် ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ဝင့်ထည် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှုနိုင်စေ ရန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးတွေကို အရမ်းလွမ်းနေကြောင်း ငိုပြီးပြောပြ လာ တဲ့ မအူဝဲ နဲ့ ကိုပြေတီဦး
ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ဝေဒနာကို အလူး အလဲ ခံစားနေရပြီး အောက်ဆီဂျင်ရှုနေရ တဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့မိခင်အတွက် ဆုတောင်းရင်း ငိုကြွေးနေတဲ့ မီးနို